आज आमिर खानको जन्मदिन, यी हुन् उनका ५ हिरोइन जसले उनीसंग पर्दामा आगो लगाए – Medianp
MediaNP NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन ३०, २०७५१७:०१
एजेन्सी, आज बलिउडका मिस्टर पर्फ़ेक्सनिस्ट आमिर खानको जन्मदिन । उनले बलिउडमा कैयौं सुपरहिट र ब्लक्बस्टर फिल्म दिएका छन् । उनले आफ्नो करियरको सुरुवात बच्चा बेला देखि नै गरेका थिए । सन् १९७३ मा उनकै अङ्कल नासिर हुसेनको चलचित्र ‘यादो का बारात’ बाट डेब्यु गरेका थिए । एडल्ट भूमिकामा भने उनि सन् १९८४ मा फिल्म ‘होलि’बाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेका हुन् । लगत्तै सन् १९८८ मा आएको ब्लक्बस्टर फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ बाट आमिरको करियर बलियो बनेको थियो । यस फिल्ममा उनि जुही चावलासंग जोडी बनेका थिए । आमिर र जुहीको जोडीलाई बलिउडमा उत्कृष्ट जोडीको रुपमा समेत लिए गरिन्छ ।
यसैबीच आमिरसंग जोडी जम्ने यस्ता ५ हिरोइनको बारे हामी तपाईंलाई बताउदै छौं । जसले उनिसंग स्क्रिनमा आगो नै लगाएका थिए ।
१. जुही चावला
आमिरसंग काम गरेका सबै हिरोइनमध्य उत्कृष्ट जोडीको नम्बर एकमा आउछिन् जुही चावला । सन् १९८८ मा आएको ब्लक्बस्टर फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ बाट यी दुईले पहिलो पटक एकसाथ कम गरेका थिए । स्क्रिनमा जमेको यो जोडीले इश्क, लभ लभ लभ, तुम मेरे हो लगायत अन्य धेरै फिल्ममा एकसाथ काम गरेका छन् । आमिर र जुहीको जोडीलाई बलिउडमा उत्कृष्ट जोडीको रुपमा समेत लिए गरिन्छ ।
सन् १९९६ मा आएको अर्को ब्लक्बस्टर ‘राजा हिन्दुस्तानी’ मा अमिर र करिश्मा कपूरको जोडी निकै रुचाइएको थियो । आज पनि यस फिल्मको ‘परदेशी’ गीत लोकप्रिय छ । यस बाहेक यी दुईले अन्दाज आपना आपनामा पनि काम गरेका छन् ।
३ मनिषा कोइराला
सन् १९९५ मा आएको ‘अकेले हम अकेले तुम’मा आमिर खान र मनिषा कोइरालाको जोडीलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका थिए । यसै फिल्मको ‘राजाको रानी से प्यार होगया’ बोलको गीत आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ । यस्तै यो जोडीले फेरी सन् १९९९ मा चलचित्र ‘मन’मा संगै काम गरेका थिए । ‘मन’ फिल्मलाई दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका थिए भने यसका गीत पनि चर्चित भएका थिए ।
4. माधुरी दिक्षित
सन् १९९० मा आएको ‘दिल’ मा आमिरको जोडी माधुरीसंग खुब जमेको थियो । यससंगै उनीहरुले सन् १९९० कै अर्को फिल्म दीवाना मुझ सा नहीमा पनि काम गरेका थिए ।
धेरै फिल्म एकसाथ नगरेता पनि आमिर खानको जोडीको रुपमा दर्शकले काजोललाई पनि उत्तिकै रुचाएका थिए । सन् २००६ मा आएको चलचित्र ‘फना’मा यी दुईले जोडी बनेर काम गरेका थिए ।
यी आश्चर्य लाग्दा कुरा ! जुन विवाहको अघिल्लो रात युवतीहरुले सोच्ने गर्छन् !
चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीतमा आयो अर्को दमदार दोहोरी गीत (भिडीयो सहित)